Ungathatha kanjani "Aevit" ngezinwele. Yeka ukuthi amavithamini "Aevit" angene kanjani ekukhuleni kwezinwele. Ukuthenga, ukubuyekezwa kwamakhasimende kanye namanani alinganiselwayo kuma-pharmacy
Ngesikhathi sokuqala kwezinsuku zasentwasahlobo enhle, amantombazane afuna ukususa ngokushesha izinwele zekhanda futhi abonise izwe elihle kakhulu, elilalelayo, elikhazimulayo lezempilo. Kodwa-ke, empeleni kuhlukile: ngemuva kokubusika ngokungazelelwe uqaphele ukuthi izintambo ziba buthakathaka, ziphahlazeka futhi ziphilile, zibenza zibe nzima, futhi izinwele ngokwayo zigcina ukubukeka okusha nokuhle kwamahora ambalwa. Ukunciphisa, okwenziwe ukulahleka, ukwehlukaniswa kuphelile ekugcineni kwezinwele - ukungazwakali okungajabulisi kungatholwa kanye ngabanye bethu. Isimo sezinwele sithinteka yizici eziningi ezihlukene: kusukela kokudla okunomsoco kuya kwesimo sezulu, kanye nokuntula kwevithamini yonyaka akusona isizathu sokugcina sokungahle kube khona ukuwohloka kokubonakala kwekhanda. Mayelana nokuthi amavithamini "Aevit" asebenza kanjani izinwele, ukuthi angayithatha kanjani ngaphandle nangaphakathi, futhi mayelana nezindlela zokupheka ezisebenza ngokusekelwe kulo muthi, sizokutshela esihlokweni sethu. Kumele ukhethe uhlobo olufanele kakhulu lokukhululwa kwesithasiselo bese uqala ukwenza. Ubumnandi bezinwele manje usezandleni zakho.
Yini okufanele uyenze, ukuze izindophi ziphinde zithole amandla abo
Isidakamizwa esithi "Aevit" sezinwele siyithola ngempela. Ukuhlanganisa inhlanganisela eyingqayizivele yamavithamini A no-E, kuthinta kahle izinwele zombili ngaphakathi (ngokungenisa) nangaphandle (ngokufaka okuqukethwe kwe-capsule kuma-masks, ama-balms, ama-compounds anakekelayo).
Ubuhle beMathematics: Kuyini i-A + E?
Zombili izinto: i-retinol (i-vitamin A) ne-tocopherol (i-vitamin E) i-soluble enamafutha. "Bahlangana" ngokuphelele ekubunjweni kwesidakamizwa esisodwa, ukwengeza nokuqinisa izindawo zokuphulukisa zomunye nomunye. I-Retinol yaziwa njengengxenye ye-creams ekhishwa ngamagciwane kanye nokuvikela isikhumba: njengendlela yokulawula enamandla yezinqubo zamathambo ezinhlobonhlobo, ivuselela ukuvuselelwa kwamaseli, ikhulisa ukuqina kwesikhumba nezinwele, futhi inomphumela omuhle emsebenzini wezinhlayiya ze-sebaceous and sweat. I-tocopherol ingenye yama-antioxidants anamandla, inciphisa inqubo yokuguga, ivikela amangqamuzana emiphumeleni eyingozi yemvelo yangaphandle nemiphumela emibi yemikhiqizo ye-metabolic. Ihambisana nevithamini A ukuthi izakhiwo zayo ezizuzisayo zizibonakalisa ngokwakho ngokuphelele, futhi, futhi, zikhuthaza ukungena ngokugcwele kwe-retinol. Njengoba kunikezwe zonke izimfanelo ezinhle zezingxenye, kungase kuthiwe ukuthi ukusetshenziswa kwesidakamizwa esithi "Aevit" yezinwele - okunye okunye okumele kube khona kumaski abizayo futhi angasebenzi ngaso sonke isikhathi kanye nama shampoos. Into esemqoka ukukwenza njalo. Ulwazi mayelana nomthamo nokuthi kaningi kangakanani udinga ukuthatha amavithamini, kanye nencazelo yomuthi nolunye ulwazi oluwusizo oluchazwe ngezansi.
Kuyini - isidakamizwa "Aevit" sezinwele?
Okokuqala, "u-Aevit" ukulungiswa kwemithi, ngakho-ke, ngaphambi kokuba ungene ngaphakathi, kubalulekile ukubonana nodokotela. Noma kunjalo, ukusetshenziswa kwangaphandle akukho ukulinganiselwa nokuphikisana, ngaphandle kwe-hypersensitivity kanye nokungezwani komzimba ezingxenyeni zayo. Uma uhlushwa izifo ezingapheli, kusadingeka uthintane nodokotela mayelana nokufaneleka nokuphepha kwesicelo se-topic of the drug. Bakhiqiza amavithamini e-Aevit ema-capsules nama-ampoules, kanti okulandelayo kuyindlela efanelekayo yomkhiqizo wokusetshenziswa kwezithokozi. Uma ukwazi ukuthola ama-capsules kuphela - akunandaba, azophinde abhekane nomsebenzi ngokugcwele, ngoba ukwakheka kuyafana! Ngendlela, uma unquma ukuthatha imithi yangaphakathi, kufanele uphuze i-capsule 1 kanye ngosuku. Ubude benkambo yizinsuku ezingu-30-40, emva kwalokho kufanele wenze isikhala okungenani izinyanga ezintathu.
Umkhiqizo omuhle kakhulu we-"Aevit" wezinwele obunzima, owomile futhi olahlekelwe ukuqina kwezemvelo. Ukwenza izimpande, njalo njalo kusihlwa, yenza ukusikhipha kwe-scalp ekukhanyeni usebenzisa okuqukethwe kwe-ampoule eyodwa noma amakhemikhali amaningana omuthi. Emva kwenkambiso, kubalulekile ukubopha ikhanda lekhanda ekhanda lakho noma ukufaka isikhwama sokuzivikela (ukuze ungangcolisi i-pillowcase), bese ulala. Ekuseni - ugeze kanye nesitayela izinwele zakho, njengokujwayelekile. Kodwa-ke, kungcono ukugwema izinwele zezintambo eziyinkimbinkimbi phakathi nenkathi yokwelapha, kanye nokusetshenziswa kwezinsimbi zezinwele zensimbi nezaseplastiki, ama-band elastic stretch, njll. Kwanele ukwenza le massage izikhathi ezingu-2-3 ngesonto izinyanga ezimbili ukuqaphela imiphumela emihle emihle: izinwele ziyoba ezithambile, eziluhlaza, eziqinile nokulalela. Kuhle kakhulu ukusebenzisa i- "Aevit" ukuphatha amathiphu amathiphu. Yiqiniso, noma yiliphi i-hairdresser elizokutshela ukuthi indlela engcono kakhulu yokusika izinwele ukusika izinwele, kodwa phakathi nenkathi ephakathi kwezinwele, ikakhulukazi labo abanezinwele ezinde, lesi sidakamizwa sizosiza ukugcina izinwele zezinwele ziphelile, zizondla, zigcwele amandla kanye nomswakama. Indlela yokusebenza ifana: gubungula okuqukethwe kwama-capsules amaningana ngobusuku emathiphu owomile bese ugeza ekuseni.
Ukuxazulula izinkinga: izinwele zibopha nge "Aevit"
Ngaphandle kwesicelo esimweni esihlanzekile, lokhu kulungiselelwa kwamavithamini kungabuye kwengezwe kumaski aqedile nama-balms. Kodwa kungcono ukulungisa imaski ngekhambi lakho "Aevit" ngokwakho. Izithako ezidingekayo kule mpilisi yesimangaliso zitholakala esiqandisini noma eshalofini lesitolo. Nazi izindlela ezimbalwa zokupheka: thatha isipuni samafutha aluhlaza okhilimu omuncu, engeza okuqukethwe kwe-ampoule yesidakamizwa esithi "Aevit", faka ngokucophelela futhi usebenzise ezimpandeni zezinwele, uhlambe ngobumnene. Shiya amahora angu-2, bese ugeza nganoma yisiphi shampoo. Ngokusebenzisa njalo izikhathi ezingu-1-2 ngesonto isikhathi eside, le maski izokusiza ukuqeda izinwele ezomile, zenze kube lula ngokwengeziwe futhi zenzeke. Uma ufisa, ukhilimu omuncu ungafakwa esikhundleni sezikhupha ezimbili. Kuzoba yithuluzi elihle kakhulu uma uhlanganisa okuqukethwe kwe-ampoule yesidakamizwa esithi "Aevit" ngamafutha omuthi angasetshenziswanga (isib., Linseed, sesame, avocado) isilinganiso esingu-1: 1 (ukulungiselela oku-2 tsp, i-2 tsp oil). Lokhu kuyindawo ehle kakhulu yokudla okunomsoco ophelile , omile futhi ohlukanisayo. Uma ungeza ngamaconsi angu-5 kuya kwangu-10 amatshe abalulekile abalulekile (izinwele ze- ylang-ylang, i-verbena, i-rose, i-rosemary) yalolu sakhiwo, bese ngaphezu kwezinzuzo, uzothola iseshini esihle kakhulu se-aromatherapy. Shiya idivayisi ukuze usebenze imizuzu engu-30, bese ugeza ngokucophelela.
Ezinye izindlela ezimbalwa zokuphatha nokuqinisa izinwele nge "Aevit"
Kuyaziwa ngomphumela wokuphulukisa wamafutha e-burdock ezinwele nasezikhungweni ze-scalp. Futhi ukuqinisa umphumela walo kuzosiza, empeleni, isidakamizwa "Aevit." Kwanele kuphela ukuxuba amanani amavithamini namafutha alinganayo (kuye ngobukhulu bezinwele uzodinga amathisipuni ama-1-2 nesilinganiso esifanayo semithi). Esinye isibonelo esihle sokusebenzisa i-Aevit amavithamini ekukhuleni kwezinwele kuyindlela ephumelelayo kakhulu yokulahlekelwa kwabo, okuyize, naphezu kokuphazamiseka okuthile (abantu abambalwa abanjengo-onion smell), kusebenza kahle. Ukugqugquzela izinqubo zokuxuba emzimbeni esikhwameni, kusheshisa ukukhula kwezinwele zezinwele nokuqinisa izinwele. Ukuze ulungiselele imaski enjalo yesimangaliso, kubalulekile ukuthatha isipuni samaju anyanisi, engeza okuqukethwe kwe-ampoule eyodwa ye- "Aevit", hlanganisa nokuvumelana okuhambisanayo bese uthola ukwakheka okutholakala kahle esikhwameni.
Ukubuyekeza mayelana nomuthi "Aevit"
Akunakwenzeka ukuthola okuphumelelayo futhi, okubaluleke kakhulu, izindlela ezingabizi kakhulu ukuxazulula izinkinga ngezinwele kunokuba umuthi "Aevit", okuyinto uma isetshenziswa ngaphandle inikeza imiphumela enkulu. Ukubheka ukubuyekezwa, amantombazane asebenzisa la mavithamini njengengxenye yezikhungo ezinakekelayo anelisekile ngomphumela. Ngakho-ke, abantu abaningi bathi izidakamizwa zisebenza kahle ngokulwa nezinwele ezinamandla, ama-curls abonakala ekhanya. Liphinde ithuthukise isimo se-scalp.
Mhlawumbe, yini engasimisa lapho sikhetha ukuphumelela kakhulu, uma ukholelwa ukukhangisa, kusho ukunakekela izinwele izinkinga kuyindleko ephezulu. Kodwa-ke, uma unquma ukusebenzisa lesi sidakamizwa esithi "Aevit" ngezinwele, intengo izokumangaza ngokumangazayo: izindleko ezilinganiselwayo yi-ruby 60-100 ngephakheji ngayinye, kuye ngokuthi inani lamaphilisi. Ukupakisha kusho ukuthi "Aevit", equkethe ama-capsules angu-30 we-200 mg, kubiza ama-ruble angu-105. Vumelana, intengo ephansi kakhulu yezinwele ezinhle, ezikhanyayo, ezikhanyayo. Sithemba ukuthi amathiphu anikezwe kulesi sihloko azokusiza ukuthi usebenzise isidakamizwa esithi "Aevit" sokukhula kwezinwele ngendlela efanele nangempumelelo. Phela, izinwele yingcebo futhi enye yezinkomba eziyinhloko zobuhle nempilo yabesifazane.
Ambre: izinwele Umbala. iphunga Technique: izibuyekezo, izithombe, intengo
Grey e intshebe yakhe
Ukudayiswa kwezinwele: into enhle ku-palette yamapende
Amaqanda Fried: isinyathelo ngesinyathelo recipe ngezithombe
Iqhaza abadlali. "Paranormal Activity: kaDeveli UMarku"